EUR / GBP waxay ku dhaaftay Maalinta Baanka Caalamiga ah
Jul 6, 12 • 5114 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on EUR / GBP waxay ku dhaaftay Maalinta Baanka Caalamiga ah
Maanta waa in loogu yeeray Bangiga Dhexe ee Maalinta Caalamiga ah, Bangiga Dadweynaha ee Shiinaha, Bankiga Dhexe ee Yurub iyo Bank of England oo dhan oo la sameeyo cinwaanka. EUR / GBP wuxuu ganacsi u kala goosan waayay go'aammada siyaasadeed ee BOE iyo ...
EUR / GBP waxay u diyaar garoobeysaa Dagaalka Bankiyada Dhexe
Jul 4, 12 • 3223 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off on EUR / GBP u diyaariyaan Dagaalka Bankiyada Dhexe
Shalay, ganacsiga qiimaha EUR / GBP wuxuu ku koobnaaday xawaalad ganacsi oo dherer ah oo ku wareegsan 0.8020. Isbeddelka Isniintii ee lacagta euro-da ayaa hakiyay, laakiin ma jirin wax cunto-qabatayn ah / war-bixin ah oo lagu dirayo lacagta hal-sarraysa. Warbixinada UK ma bixinin ...
EUR / GBP aan la jabin karin
Jun 27, 12 • 2102 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off ku yaal EUR / GBP-ga aan la dabooli karin
Shalay, sterling waxay ahayd mid aad u fiican, xitaa maaddaama ay wararka ku soo qulqulayaan UK aysan taageereynin lacagta. Xaqiijin la'aanta natiijada shirwaynaha EU-da ayaa ah qodobka muhiimka ah ee ganacsiga qiimaha sarreeya ee euro-ga. Si kastaba ha noqotee, nadiifku wuxuu ahaa shaqeeye. EUR / GBP ...
Lacagta Farsamada ee EUR / GPB
Jun 22, 12 • 3185 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off on The EUR / GPB Speaking Technical
Subaxnimadii Khamiista, EUR / GBP ayaa wax badan ka ganacsanayay horumarinta cinwaanka euro / USD. Labada nin waxay ku baayacmushtareen aagga 0.80 ee bilawga ganacsiga Yurub. Euro ayaa cadaadis goor hore ah ku yimid tartanka iyada oo la yiraahdo PMI Jarmalka ...
Khatarta Hirka ee EUR / USD Maanta
Jun 22, 12 • 1472 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off Khatarta Hore ee EUR / USD maanta
Habeenimo, Sucuudiga ayaa sidoo kale ku jira casaan, laakiin khasaaraha dhabta ah ma ahan mid xad-dhaaf ah, oo la siiyay khasaare fara badan oo ka yimaada Maraykanka habeenkaas. EUR / USD oo u dhow hareeraha heerarka dhow ee xaafadda bartamaha 1.25. Maanta, ma jiraan macluumaad muhiim ah oo ku jira Mareykanka.
Dib u dhigista Fed Speak
Jun 21, 12 • 988 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on Deciphering Fed Speak
Sinnaanta ayaa muujisay isbeddellada qaar ee ku hareeraysan go'aanka, laakinse waa la xidhay illaa iyo hadda. Khasaaro Maraykan ah ayaa hoos u dhacay go'aanka ka hor iyo qaar ka mid ah xayawaanka ayaa ciyaaray, sida laga soo xigtay qoraalka boodhka, taas oo keentay in ay wax ka qabato dhamaadka wakhti dheer iyo calaamad ...
Samaynta Madaxa ama Towarka EUR / USD
Jun 20, 12 • 3036 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off ku saabsan Samaynta Madaxa ama Tail of EUR / USD
Toddobaadkii hore, waxaa jiray qiimo aad u qiimeeya suuqa suuqyada caalamiga ah, oo ay ku jirto suuqa lacagta. Xogtaasi waxay ahayd kaliya mabaadii 'labaad'. Dhammaantood waxay noqdeen kuwo ka soo horjeeda doorashooyinka muhiimka ah ee Giriigga. Codkani waxaa badanaa loo arkaa inuu yahay guul muhiim ah.
EUR / USD iyo saameynta Spanish Bailout
Jun 11, 12 • 794 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off on EUR / USD iyo saameynta Spanish Bailout
Toddobaadka dhexdiisa, hoggaamiyayaasha yurub ayaa isku raacay xirmo loogu talagalay qeybta bangiga ee Spain. Falanqaynta qotada dheer ee heshiiskan waxaa laga heli karaa qaybta dakhliga ee warbixinta. Euro ayaa kor u kacday subaxnimadii saaka, isla markaana wuxuu isku dayey inuu dib u helo ...
Ugu sarraysa Sterling iyo Yen
Jun 6, 12 • 969 Views Faallooyinka Suuqa • Comments Off on A ugu sarraysa ee Sterling iyo Yen
Subaxnimadii subaxnimadii, heerka sicirka ee USD iyo JPY ayaa cadaadis dhexdhexaad ah keenay hoos u dhaca EUR / USD iyo EUR / JPY oo miisaamaya labada nin. USD / JPY wuxuu gaaray heer hoose oo ku yaala 78.11 horaantii Yurub wuxuuna dejiyey waxoogaa ka sarreeya heerkan inta lagu jiro fadhiga subaxnimada ...
A Aasaasiga Aasaaska iyo Farsamada ee EUR / GBP
Jun 5, 12 • 4762 Views Qiimaha Ganacsi ee Forex • Comments Off on A Aasaasiga Aasaaska iyo Farsamada ee EUR / GBP
Isniintii, suuqyada London ayaa la xidhay. Si kastaba ha ahaatee, xitaa iyada oo aan lahayn UK ​​dhaqaale ku saabsan shaashadaha, ganacsiga ee EUR / GBP xadiga xad dhaafka ah ayaa aad u xiiso leh. Labada nin ayaa lagu arkay meel sare oo 0.80 inta lagu guda jiro fadhiga subaxnimada ee Europe. Lugta cusub ee lugta ee euro ...